जहाँ ६५ रुपैयाँमै खान पाइन्छ पेटभरी खाना…भिडियोसहित — Motivatenews.Com
काठमाडौं – काठमाडौंमा तपाईँले खाना खानका लागि कति रुपैयाँसम्म तिर्नुभएको छ ? कहिल्यै पैसा नपुगेर भोको बस्नुपरेको अनुभव तपाईंसँग छ ? सामान्य खाजा खाने भन्दा कम खर्चमा खाना खान पाइन्छ भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईं पत्याउनुहुन्छ ? तपाईलाई पत्यार नलाग्नसक्छ, हाम्रो टीम नेपालले काठमाडौंको यो महँगीमा ६५ रुपैयाँमै पेटभरी खाना खुवाइरहेको छ ।
काठमाडौँको अनामनगरमा हाम्रो टिम नेपालले हाम्रो खाना घरको स्थापना गरेर सस्तो मूल्यमा खाना खुवाइरहेको छ । यहि माघ १७ गतेदेखि संचालनमा आएको यो खानाघरले बिहान ९ बजेदेखी बेलुका १० बजेसम्म खाना खुवाइरहेको छ । ‘तपाईंले खाएको खानाबाट बचेको पैसाले अर्को एउटा भोको पेट भरिन्छ’ भन्ने नारासहित सुरु भएको यो खानाघर चलाउने समूहले थापाथलीमा बिहान निःशूल्क खाना बितरण पनि गर्दै आएको छ।
बर्ष सन् २०१९ बाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि लकडाउन भयो । त्यही लगडाउनका कारण हजारौं नेपालीले रोजगारी गुमाए भने धेरैलाई विहान बेलुका छाक टार्न पनि मुस्किल भयो । यही अबस्था देखेर ति दुखी गरिबको घाउमा मलम लगाउन आइपुग्यो हाम्रो टिम नेपाल ।
हाम्रो टिम नेपालले खानामा नै जोड दिनुको कारण खाना पहिलो आबस्यकता भएकाले मात्रै होइन। यो सँग यस संस्थाका अध्यक्ष बिमल पन्तले केही बर्षअघि भोगेको एउटा घटना पनि जोडिएर आउँछ। करिब ५ बर्षअघि खल्तीमा १२० रुपैयाँ बोकेर उनि एउटा होटलमा खाना खान गएका थिए। खाना अर्डर गरेर हात धोइ टेबलमा बसेका उनको आँखा त्यहाँ भएको मेनुमा पर्यो। सादा खाना १५० लेखेको देखेपछी उनी ३० रुपैयाँ नपुगेर अर्डर गरेको खाना छोडेर हिडनुपर्यो। बिमलले ५ बर्षअघि भोगेको यो घटना आज पनि धेरै बिद्यार्थी, मजदुर आदिको भएकाले खाना मा नै पहिलो प्राथमिकता भएको हो ।
एक पटकमा ८३ जना बसेर खाना खान मिल्ने क्षमताको उक्त खानाघरमा दैनिक ८०० जनालाई खाना खुवाउने लक्ष्य उनीहरुको छ। करिब ४०० जनाले अहिलेपनि दैनिक खाना खाइरहेका छन् ।
यो संस्थाले यसरी खाना खुवाउनका लागि व्यापक मात्रामा स्वम्सेवक परिचालन गरेको छ। ३/४ जना भान्सामा काम गर्ने मात्र तलब खाने स्टाफ हुन् । यसो हुँदा उनीहरुलाई खर्च ब्यबस्थापन सजिलो भएको छ।
यहाँ खाना खान आउनेहरु पनि सस्तोमा खाना खान पाएर दङ्ग छन् । उनीहरु टाढा–टाढाबाट यहाँ खाना खान आएको बताउँछन् । यी खुसी भएका ग्राहकले नै त हो बिमल र उनको समुहलाई निरन्तर काममा खटिन उर्जा दिने। कति ग्राहकले त बिमलहरुलाई रेट बढाउन र आबस्यक परे जुनसुकै सहयोगका लागि सम्झिन आग्रह गर्छन ।
केही ग्राहकहरु चाहिँ आफ्नो घरायसी समस्याले खाना बनाउन नपाउदा यतै सजिलो भएर पनि खाना खान आएको बताउँछन् । त्यस्तै यहाँ खानामा अति रमाएका अर्का ग्राहक आफूलाई तारे होटलभन्दा बढी यहि खानाघर भएको बताउँछन् ।
हाम्रो टिम नेपालले यसरी सस्तो खाना खुवाउदा समय र पैसाको बचत हुने मात्रै नभइ श्रम बजारसमेत सुलभ हुने बिमलको भनाइ छ। खाना खुवाउनुका अलवा हाम्रो टिम नेपालले अन्य थुप्रै कामहरु पनि गरिरहेको छ। राष्ट्रलाई बिहानै चाहिने ब्रस देखि बेलुकासम्म चाहिने टोइलेट फ्लससम्म आफै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य संस्थाको छ। एउटा प्रोजेक्टको काम करिब ३० प्रतिशत सकिसकेको छ भने अन्य ८ प्रोजेक्टहरु पनि पाइपलाइनमा छन् ।
यो देशमा सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको हाम्रो टिम नेपाल जस्तो संस्था छ र त गरिब, दुखी हरुको मुहार केही उज्यालो भएको छ। भोकाहरुको पेट भरिएको छ अनी नाङ्गाहरुको आङ ढाकिएको छ ।
२०७७ माघ २६ गते प्रकाशित
व्यवसायीक च्याउ खेतीले आकाशलाई दिलाएको सफलता (भिडियो सहित )
लक्ष्मीको घरमा लक्ष्मीले भित्राएको खुसी (भिडियो सहित)